South Tyrol waa gobol madaxbannaan waqooyiga talyaaniga. Waa mid ka mid ah labada gobol ee madax-bannaan oo ka kooban gobolada gobolka ee Trentino-Alto Adige / Südtirol Baasaboorka rasmiga ah ee rasmiga ah waa Autonome Provinz Bozen - Südtirol ee Jarmalka, Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ee Talyaaniga iyo Provinzia autonoma de Bulsan - Südtirol ee Ladin, oo ka tarjumaysa saddexda kooxood ee ugu weyn ee ay dadku ka tirsan yihiin. Gobolka ugu waa weyn waqooyiga Talyaaniga, kan labaad ee ugu weyn, oo leh degaan dhan 7,400 oo kiilomitir oo kiilomitir (2,857 sq m) iyo dad tiradoodu dhan tahay 527,005 qof oo ka mid ah 2017. Magaalada caasimadda ah iyo magaalada ugu weyn waa Bolzano (Jarmal: Bozen; Balsan ama Bulsan).
The Atlas Tyrolensis, oo muujinaya gobolka oo dhan Tyrol, daabacay ee Vienna. 1774
Sida laga soo xigtay tirakoobka 2014-ka oo ku salaysan tirakoobka 2011, 62.3% dadku waxay ku hadlaan Jarmal (Jarmal Standard oo ku qoran qaab qoraal ah iyo lahjadda Austro-Bavarian ee qaabka lagu hadlo); 23.4% dadweynaha waxay ku hadlaan Talyaani, inta badan gudaha iyo agagaarka labada magaalo ee waaweyn (Bolzano iyo Merano); 4.1% wuxuu ku hadlaa Laden, luqad Rhaeto-Romance; 10.2% dadka (inta badan muhaajiriinta dhawaan) waxay ku hadlaan luqad kale oo ah luqadda koowaad.
Gobolka waxaa la siiyaa heer aad u sarreeya oo ah is-maamul, kaas oo ka kooban awood ballaaran oo sharci-dejineed oo awood leh iyo nidaam maaliyadeed kaas oo u oggolaanaya inuu sii haysto qayb ka mid ah canshuuraha la soo qaatay, iyadoo waliba ka hadhaysa miisaaniyadda qaranka . Ilaa 2016-ka, gobolka Bozen waa kan ugu taajirsan Talyaaniga iyo kuwa ugu qanisan ee Midowga Yurub.
Marka la eego xaaladda guud ee Midowga Yurub, gobolku waa mid ka mid ah saddexda xubnood ee Euroregion ee Tyrol-South Tyrol-Trentino, taas oo u dhiganta ku dhawaad ​​gobolka gobolka Tyrol. Xubnaha kale waa gobolka Tyrol ee Awstaria, waqooyiga iyo bari, iyo gobolka Talyaaniga ee Trento ee Koonfurta.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=South_Tyrol&oldid=221646"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:19.